पुरुष काम बासनाको कति भोको ! | We Nepali
पुरुष काम बासनाको कति भोको !
२०७५ असोज ३ गते १०:४४
आज नेपाल देश अनि सारा नेपालीको मन रोएको छ । मुटु दुखेको छ किनकि हाम्री छोरी निर्मला पन्त, एक नेपाली चेली मानवको स्वरुप बोकेको एकजना दानवबाट बलात्कृत भइ मृत्युवरण गरेकी छिन् । सायद मानव इतिहासमा कुनै मृत्यु यति दुःखदायी हुन्न होला जति बलात्कृत अनि हत्या हुन्छ । उनको पीडाको चित्कारले क्षितिज चिरिएको थियो होला । धर्ती फाटेको थियो होला, नदी सुस्ताएको थियो होला । हावा रोकिएको थियो होला, आकाशका ताराहरु रुंदै थिए होलान् । बर्खे झरीको रातको अंधेरीमा स्यालले तिम्रो शरीर खेलाउंदै लुछयो होला अनि कालो रात झनै कालो भई कति नतमस्तक बन्दै प्रहर बित्यो होला । खै त्यो मानसिक रोगीले के आनन्द लुट्यो कुन्नी छोरीको शरीर लुछेर, सुन्दर कोपिला चुंडेर सायद तिम्रा लागि यस धर्ती त के नरकमा पनि बास मिल्ने छैन् । धिक्कार छ आमा तिमीले कस्तो सन्तानको जन्म दियौ एक बलात्कारी, एक हत्यारा, सारा नारी अस्मिताको लुटेरालाई, सारा सृष्टि अनि रचयिता ईश्वरको बदनामीको ।
ए मान्छे हो पशु भन्दा पनि तल नगिर न । मान्छे हुनुको केहि गुण जोगाउ । मान्छे हुनु पैसा कमाउनु, सन्तान उत्पादन गर्नु अनि राम रमितासंग बांच्नु, आफ्नो बासना र स्वार्थ पूर्ति गर्नु मात्र जीवन होइन् । जीवन इश्वरको एक सुन्दर उपहार हो, अवसर हो । मुक्तिको अवसर, सेवा गर्ने अवसर, ज्ञान प्राप्त गर्ने अवसर । फुल्ने अवसर, फुलाउने अवसर । आनन्द लिनु र दिनु, सक्नु हुन्छ सेवा गर्नुस् हरेक प्राणीको, सक्नु हुन्न दुःख चाहिं नदिनोस् । चेतनशील प्राणी भएर सुन्दर जीवनलाई सुन्दरतम बनाउनोस् । यौन र बासना बढ्नु र बढाउनु मानसिक समस्या हो । एक असल व्यक्तिमा कदापी यस किसिमको नकारात्मक धारणा मन अनि चित्तमा आउन र जाग्न सक्तैन् । यौन एक सृष्टिको सम्मान हो जसले इश्वरबाट इश्वरको जन्म हुन्छ । एक श्रीकृष्णको, एक श्रीरामको, एक बुद्धको, एक महावीरको, एक जिससको । यो चराचर जगत निरन्तरताको सुन्दरतम पक्ष हो, आत्मा आनन्दबाट एक मिठो सृजना सृजित हुन्छ, निस्वार्थ प्रेम र यसबाट समर्पित यौनबाट एक सपुतको सृजना हुन्छ, जन्म हुन्छ, धर्तीलाई शोभायमान गराउंछ ।
जसले सृष्टि र जगतलाई बुझेका छैनन् ती दानवहरु बासना पछि भाग्छन् अनि त्यहि सुख नै सबथोक ठानेर भाग्छन् तर त्यो भ्रान्ति हो अनि क्षणिक हो । त्यो मानसिक समस्या, पागलपन हो, अवस्य आनन्दको माध्यम होइन् । जब आचरण र प्रेमबाट बाहिरिन्छन् तब परस्त्री गमन, असंख्य स्त्रीको चाहना, अप्राकृतिक चाहना र बलात्कारी सोचको चित्तमा निर्माण गर्छ । एक दानवीपनको विचार अनि कर्म गर्छ जसका कारण हजारौं निर्मलाको बलात्कार हुन्छ अनि घांटी निमोठिन्छ अनि एक आमा असुरक्षित हुन्छिन्, छोरी असुरक्षित हुन्छिन् । एक बहिनी असुरक्षित हुन्छिन् । एक भाउजु असुरक्षित हुन्छिन् आफ्नै घर भित्र, आफ्नै बस्तीमा, आफ्नै गोरेटोमा, आफ्नै पंधेरीमा । अनि समाजका विश्वास, आशा, भरोसाका भावहरु, प्रेमका थुंगाहरु, आस्थाका बस्तीहरु बाझिनेछन्, धर्ती बन्जर हुनेछ । मायाका बिन्दु, दयाका खानी, करुणाका सागर नारी ह्दय जब च्यातिन्छन्, टुक्रिन्छन्, हत्या हुन्छन् र बलात्कृत हुन्छन् ।
करिव ६ महिना अघि एक पत्रिकामा छापिएको जानकारी अनुसार नेपालमा महिना दिनमा झण्डै ७८ वटा बलात्कारको घट्ना घट्छन् । यसबाट थाहा पाउंछौं कि मानव सभ्यता कता तिर जांदै छ । जनावर भन्दा पनि हिंस्रक भए मान्छे भन्ने प्राणी । तथाकथित लोग्ने मान्छे, मर्दका ब्राण्ड भिरेका नामर्द, दुर्गा माताको पूजा गर्दै निर्मला बलात्कार गर्ने कायर । मन, बुद्धि, ह्दय र शरीरलाई सामन्ज्यस्यता गर्न नसक्ने मनोरोगी, कुण्ठा पालेर बांचेका पापी, एक कलिलो मुना निमोठ्ने हत्यारा । जनावर सृष्टिको लागि यौन क्रियाकलाप हुन्छ, पाक्षिक हुन्छ । मान्छे त यौन पिपाशु छन्,त्यसैको लागि मात्र बांच्छन्, धिक्कार छ तिम्रो जीवनलाई । मान्छे हुनुलाई, बासाना लिप्त तिम्रो बचाईलाई ।
म आज निर्मलाको आत्माको चित्कार सुन्दैछु र केहि शब्दका समवेदना टक्रयाउन चाहन्छु । मेरा यी अक्षरहरु मेरै अनि हजारौं जनहरुको दुखेको मन, आत्माको न्यायका लागि कोर्दै छु । आज मेरो लक्ष्य ती आमाहरुलाई गर्दै छु जसले आफ्ना सन्तानलाई पहिलो शिक्षा दिनु हुन्छ । आफ्ना सन्तानलाई कि सृष्टिको सम्मान गर्न सिकाउनोस्, चेलीबेटीको इज्जत गर्न सिकाउनोस्, आचरणमा रहन सिकाउनोस् । हरेक आमाले यहि पाठ आफ्ना सन्तानलाई दिए भने सुन्दर सृष्टिको निर्माण हुनेछ । म आज यो लेख्दै गर्दा मेरो छोरालाई मैले एउटा मात्र उसंग माग राखेको छु कि तिमीले मलाई केहि दिनु पर्दैन बाबु । दिन्छौ त केवल असल आचरण देउ । आफ्नो प्रेमिका, जीवन साथी, जीवन संगिनी भन्दा अरु कुनै स्त्रीसंग शारीरिक सम्बन्ध राख्ने छैनौ । जीवनको उर्जा नकारात्मक दिशातिर जान दिने छैनौ, यौन बासनाबाट टाढा रहनेछौं भनेर माग राखेको छु अनि एउटा मात्र आशा राखेकी छु । आशा छ आफ्ना छोरा संग हरेक आमाको यहि माग हुनेछ ।
मेरा यी अक्षरी कलम बन्द गर्नु अघि ती नानी, उनका परिवार अनि सम्पूर्ण नारीहरुले न्याय पाउनेछ, हत्यारालाई अदालतको कठघरामा ल्याउने छ र सरकार न्याय र मानव सभ्यता स्थापना गर्न सफल हुनेछ । अपराधी र अपराधिक मन मस्तिस्क पालेर बांच्नेले ठूलो पाठ सिकुन्, हरेक नारीहरुले सुरक्षित महशुस गरुन् । आमाको कोखले अपजस नपाउन असल नागरिक धर्तीले जन्माउनेछ र प्रेम अस्तित्वको जगत निर्माण हुनेछ ।
निर्मला तिम्रो आमा र बाबासंग म टाढा भए पनि आंशु बांढेकी छु, दुःख साटेकी छु , मेरो छोरी, तिम्रो आत्माले शान्ति पाओस् र इश्वरको काखमा तिम्रो बास सुरक्षित होस् ।